Etu esi emegharị WhatsApp na kaadị SD n'ụzọ dị mfe - Ntuziaka Nkuzi | Nzukọ Ekwentị
Izipu ikpo okwu aburula ihe ejizi ahia karie uwa nile ikwurita okwu, karia oku karia ndi oru nzuzo. Ma na mgbakwunye na ozi ederede, m na-enye anyị ohere izipu vidiyo, onyonyo, faịlị na ọbụlagodi olu.
Ihe mbụ m nwere ike iyi dị ka echiche dị egwu bụ nsogbu na n'ikpeazụ ọ na-emetụta ikike nchekwa nke ọdụ anyị, ebe ọ jupụtara na vidiyo niile, ọdịyo, faịlụ na onyonyo anyị nwetara, ma ọ bụrụ na anyị ewereghị ihe kwesịrị ekwesị usoro iji gbochie ha ịchekwa na ọdụ anyị. Azịza ya agafeela bugharịa WhatsApp na kaadị SD.
1 Akpaka ịzọpụta na WhatsApp
2 Gbanyụọ akpaka ịchekwa ihe oyiyi na vidiyo na WhatsApp
3 Bugharịa WhatsApp na kaadị SD
4 Ego ole ka WhatsApp biri na ngwa m?
Akpaka ịzọpụta na WhatsApp
Mgbe m kwuru na anyị ewerebeghị ohere iji mee ihe, m na-ekwu na ndabara, WhatsApp budata ma chekwaa ọdịnaya niile anyị natara na ama anyị ma obu na nkata mmadu. N'ime nhọrọ nhazi, WhatsApp na-enye anyị ohere ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ụdị nchekwa a niile echekwa na akpaghị aka ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ iji aka anyị echekwa ya.
Guzosie ike na nhọrọ ikpeazụ a kachasị atụ aro ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere nyocha ọdịnaya niile anyị chọrọ ịdebe na ekwentị anyị na oge na-adịghị anya, anyị na-ezere na ngwaọrụ anyị mejuputa ngwa ngwa anyi choro ichekwa.
Gbanyụọ akpaka ịchekwa ihe oyiyi na vidiyo na WhatsApp
Na ụzọ ala, oge ọ bụla anyị wụnye WhatsApp maka oge mbụ, a na-ahazi ngwa ahụ ka ọ bụrụ na-akpaghị aka ibudata na-echekwa faịlụ niile na anyị na-enweta site na Wi-Fi na naanị ihe oyiyi ma ọ bụrụ na anyị na-eji njikọ data.
para gbanyụọ akpaka faịlụ ịchekwa na WhatsApp anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbụ, anyị na-enweta ya Ntọala WhatsApp site na ịpị ntụpọ atọ kwụ ọtọ dị na akuku aka nri nke ngwa ahụ.
N'ime Ntọala pịa Data na nchekwa.
Na nkebi Nbudata na akpaghị aka anyị nwere nhọrọ abụọ
Download na ekwentị mkpanaaka.
Were Wi-Fi budata
Iji gbanyụọ nchekwa na-akpaghị aka anyị ga-enweta nke ọ bụla na ngalaba ndị a wee wepu igbe ndị ahụ: Foto, Ọdịyo, Vidiyo na Akwụkwọ. WhatsApp adịghị ekwe ka deactivating akpaka download nke olu memos, iji nye ọrụ ka mma.
Typedị data a anaghị eri oke ohere Mana ọ bụrụ na iji ya eme ihe, ọ nwere ike ịnwe nnukwu ohere na kọmpụta anyị, yabụ a ga-amanye anyị inyocha ohere ha nwere wee wepu ya na ngwaọrụ anyị ma ọ bụ bugharịa ọdịnaya na kaadị SD.
Bugharịa WhatsApp na kaadị SD
Na gam akporo 8, Google webatara ikike bugharịa ngwa SD kaadị na anyị arụnyere na ngwaọrụ anyị, nke na-enye anyị ohere igbochi ya ngwa ngwa juputara na ngwa ndị anyị na-adịghị ezube iji oge niile mana anyị chọrọ ịnwe ha mgbe niile.
Isi ihe mere eji etinye ngwa na nchekwa usoro bụ igba ọsọ. Ọ bụ ezie na kaadị nchekwa dị oke ọsọ taa, nnweta nnabata na ebe nchekwa dị n’ime ya dị ọsịsọ, yabụ na ngwa ga - ebu ngwa ngwa.
Nsogbu bụ na ụfọdụ ngwa anyị enweghị ike ịkwaga na kaadị SD. WhatsApp bụ otu n'ime ha. Nanị ihe anyị nwere iji mee anyị bụ ịkwaga faịlụ niile echekwara na ngwa anyị nke na-abịakwute anyị site na ngwa a, iji tọhapụ ohere n'efu maka ngwa anyị iji rụọ ọrụ nke ọma.
Kwaga folda WhatsApp, na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ngwa dị iche iche na-enye anyị ohere ịme ya ọsọ ọsọ na mfe, yabụ ọ dịghị anyị mkpa inwe ọtụtụ ihe ọmụma a kapịrị ọnụ nwee ike ịrụ ọrụ a. Ngwa anyị ga-eji bụ Faịlị Go, njikwa faili nke Google nyere anyị n'efu.
Ozugbo anyị ebudatara ma wụnye ngwa ahụ, anyị na-agba ya ma nweta taabụ ahụ .Nyocha.
N'ime Nyochaa taabụ, anyị ga-enweta nhọrọ ahụ Nchekwa ime, nhọrọ dị n'ime ngalaba Ngwa nchekwa, emi odude ke ukot.
Ọzọ, anyị na-achọ nchekwa WhatsApp. Anyị na-enwe nsogbu na folda iji họrọ ya wee pịa na isi ihe atọ dị na vetikal na akuku aka nri elu.
N'ime nhọrọ niile egosiri, anyị na-ahọrọ Gaa na ma họrọ nchekwa dị na mpụga.
Ozugbo anyị megharịrị WhatsApp folda ma nweta ngwa ahụ ọzọ, ọ ga-emepụta folda ọhụrụ nwere otu aha ịlaghachi chekwaa faịlụ niile nke anyị na-enweta site na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị achọghị ka anyị megharịa usoro a oge niile, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ ịkwụsị ọrụ nchekwa nke ọtụtụ faịlụ anyị natara, dịka m kọwara na ọkwa gara aga. N'ụzọ nke a, ọ bụrụ na anyị nwere mmasị n'ezie n'ichekwa ọdịnaya anyị na-enweta, anyị nwere ike iji aka anyị mee ya debe ya ozugbo na gallery nke ngwaọrụ anyị.
Ego ole ka WhatsApp biri na ngwa m?
Mara ihe bụ ebe nchekwa na WhatsApp nwere na ekwentị anyị ga-eme ka anyị mata usoro anyị ga - eme iji zere nke ahụ n'ọdịnihu, anyị na - ata ahụhụ otu nsogbu ọzọ. N'okpuru m na-egosi gị usoro ị ga - agbaso mara cEgo ole ka WhatsApp biri na ama anyị:
Ozugbo anyị meghere WhatsApp, anyị ga-pịa na isi ato nke dị n'akụkụ aka nri nke ngwa ahụ.
Na-esote, pịa na Ntọala.
N'ime Ntọala, pịa Data na nchekwa.
Na mpaghara ojiji> Ojiji nchekwa oghere nke faịlụ ndị anyị budatara na WhatsApp ga-egosipụta. Ọ bụrụ na ohere dị elu, ọ ga-ewe sekọnd ole na ole iji gosipụta ya.
Oghere nke akwụkwọ WhatsApp anyị nwere ike ịnwe oge nwere ike bụrụ ihe rụrụ arụ. N'okwu m, olee otu ị ga-esi hụ na onyogho ọ bụ 10 GB, ezigbo nzuzu.
Mgbe ohere nchekwa gafere GB, anyị ga-amalite ịtụle ọ bụghị naanị ibugharị faịlụ anyị natara na mpụta mpụga, mgbe ọ bụla anyị chọrọ ịchekwa ha, kamakwa gbochie ibudata ọdịnaya niile na akpaghị aka na ngwaọrụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu esi emegharị WhatsApp na kaadị SD n'ụzọ dị mfe
Otu esi edekọ ụda PC gị n'efu na mmemme ndị a
Otu esi amata ma ọ bụrụ na ezuru WiFi m: mmemme na ngwa ọrụ n'efu